Microsoft yakaunza yakavhurika modular system yekugadzira UEFI firmware | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Microsoft yaunza chirongwa chitsva chakavhurwa, iyo "Project Mu", iri kuvandudza hwaro hwekugadzira nharaunda dzeEFI dzinotanga Hardware uye dzinopa seti yemasevhisi kurodha mashandiro.
Project Mu-based firmware yatove kushandiswa mumicrosoft zvigadzirwa seSurface uye Hyper-V.
Iyo purojekiti inovaka pabasa reTianoCore EDK2 yakavhurika UEFI stack, asi haisi forogo, inoiswa semubatsiri (module «MU»), yakarongedzwa pahwaro hweshanduro nyowani dzakagadzikana dzeTianoCore uye kudzosera yakatarwa TianoCore gadziriso uye shanduko kune chikuru chirongwa.
Izvo zviitiko zvepurojekiti zvinogoverwa pasi peiri rezenisi reBSD.
Una kiyi yakakosha yeiyo Mu chirongwa kusimudzira kweiyo pfungwa ye firmware sevhisi (FaaS, Firmware seSevhisi), ine musimboti wekupa nzira dzekuchengetedza iyo firmware uye nharaunda yeEFI kusvika parizvino.
FaaS inokutendera iwe kuti utarise firmware sechigadzirwa chinoda kuti zvigadziriswe zvekukurumidza kuti zvikwanise kupa bug uye kusagadzikana kugadzirisa kune vashandisi, pamwe nekuwedzera maficha.
Vagadziri veiyo Mu chirongwa vakaedza kugadzirisa matambudziko anomuka mukuvandudzwa kweUFI firmware, inokonzereswa nekubatanidzwa kwevatengesi vakasiyana siyana uye kushandiswa kwezvikamu zvakasiyana-siyana zvevaridzi, zvinoiswa pasi peanorambidzwa marezinesi.
Kusvika parizvino, nekuda kwekuoma kwekuronga kudyidzana pakati pevatengesi vevatengesi, vagadziri vaidzidzira kugadzira forogo yeyakajairika kodhi base pavanogadzira firmware pamwe nekuunzwa kwechigadzirwa-chakasarudzika shanduko.
Kuchengeta iyo firmware mumamiriro akadaro kwakanyanya kuomarara uye mutengo wekushandurwa uye njodzi dzinosanganisirwa neshanduko dzinokutendera kuti iwe ugadzire zvigadziriso chete mune akasarudzika mamiriro.
1 Nezve iyo Mu chirongwa
1.1 Hunhu hukuru hwaMu
Nezve iyo Mu chirongwa
Mu inopa seti yemamojuru, kuvaka maturusi, uye masitoreti anotariswa pakushandiswazve kwekodhi, nzira yekudyidzana inoshambadzirana neyekugovana repositi, uye yakasimba kudzora mhando.
Iyo inogadzirwa firmware inogona kusanganisa yakavhurika sosi yezvinhu nemidziyo yemidziyo, iyo inogadzirwa zvakasiyana uye iyo module yacho pachayo inosungirirwa kune chekupedzisira chigadzirwa pasina kutyora izvo rezinesi zvinodiwa zvemuridzi wekodzero.
Kusiyana neTianoCore, Project Mu inosanganisira mamwe maficha ekuvandudza kuenderana neMicrosoft zvigadzirwa, kuwedzera scalability (mune mamiriro ekugadziriswa kwe firmware kune akawanda akasiyana zvigadzirwa zvine makambani mazhinji anobatanidzwa), kurerutsa firmware kugadzirisa, uye kuronga zvakarongwa zvidzoreso.
ari Zvirongwa zveProjekti zvinosanganisira mushandisi mushandisi, iri -chiratidzu keyboard, maturusi ekuchengetedza zvakachengetedzwa UEFI marongero, yakakwira-inoshanda bootloader uye seti yeBIOS menyu mienzaniso.
Kuti kuwedzere kuchengetedzeka kweprojekti, iyo TianoCore kodhi base yakacheneswa nezvechinyakare zvinoriumba uye shanduko dzakaitwa kudzikisa zvinogona kurwisa vectors.
Kunze kwekodhi, chirongwa ichi zvakare iInosanganisira seti yematanho ekuronga iyo firmware yekuvandudza maitiro, maererano neFaaS paradigm, pamwe nekuunganidzwa kwemiyedzo uye maturusi ekuongorora uye kugadzirisa mhando yeiyo firmware.
Hunhu hukuru hwaMu
Interface yekumisikidza firmware (DFCI, mudziyo firmware yekumisikidza interface) uye maturusi eiyo nhare mbozha manejimendi (MDM, Nhare Yekushandisa Dhizaini);
Iyo BIOS password yekudzivirira system iyo PBKDF2 inoshandisa kune password hashing.
Tsigiro yezvinhu zvinongedzo uchishandisa masiginecha edhijitari anoenderana neEKU (Yakawedzerwa Kusevenzesa Kusevenzesa).
Uchishandisa Microsoft sisitimu yekuyedza yuniti.
Zvinoreva kuongorora, kuongorora mashandiro uye kuongorora mashandiro ehunyanzvi hwese papuratifomu.
Scalable compilation system yakanyorwa muPython.
Plug-ins kuteedzera ruzivo rwekunyorazve uye kupatsanura kweye flash tsananguro (Flash Descriptor, SPI Flash programming fomati).
Binary package package system inoenderana neNuGet package maneja.
Iko mukana wechitupa nemadhijitari masiginecha ezvinhu zvinopfuudzwa uchishandisa iyo UEFI capsule mashini (nzira dzekuchinjisa mabhainari data seti kuEFI firmware)
Visual Studio compiler rutsigiro.
Base64 encoding rutsigiro rwezvinhu zvebhinari.
Pasuru ine XML rutsigiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft yakaunza yakavhurika modular system yekugadzira UEFI firmware